Home News Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shaaciyay war aysan u riyaaqin inta badan Soomaalida
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shaaciyay war aysan u riyaaqin inta badan Soomaalida
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa intii uu socday shirkii maanta soo gabogaboobay ee Dhaqaalaha Badaha waxa uu booqday goobtii lagu soo bandhigayay wax soo saarka Soomaaliya, wuxuuna ka yiri hadal loo arkaayey kaftan in uu ka ahaa.
Mid ka mid ah hawlwadeenada goobta bandhigga ayaa madaxweyne Uhuru u sharaxayay kheyraadka kalluunka ee Soomaaliya, wuxuuna yiri “Waxaan rabnaa in kalluunka Soomaaliya loo iib keeno Kenya”.
Kadibna Uhuru Kenyatta ayaa ku jawaab celiyay “Haa kalluunka Soomaaliya waan soo dhoofsanaynaa, idinkuna qaadka naga dhoofsada”.
Qaadka ayaa ah 90% badeecooyinka ay u dhoofiso Soomaaliya, sannadkii horena waxaa kasoo galay lacag dhan Sh8.02 bilyan oo lacagta Kenya ah.
Labadan dal ayaa waxaa ka dhaxeeya heshiis aan cago badan ku taagnayn oo iskaashi ganacsi ah, kaas oo illaa hadda la sheegay in dheelitirka uusan sax ahayn, una janjeero dhanka Kenya oo maalin kasta qaad aad u tiro badan u dhoofisa Soomaaliya.
Previous articleGudoomiyaha Degmada Balcad oo dadka deegaanka geed faqay u awood-sheeganaya iyo Cabasho xoogan oo kasoo yeereeysa
Next articleEx-Militant Tests Somalia’s Fledgling Democracy (Analysis)
Duqa Muqdisho Oo La Kulmay Danjire Maxamed Cabdi Afeey Iyagoo Kala...